छोराको बिवाह गरेर ल्याएको ४ दिन पछि नै ससुरा र बुहारीबीच अ’नै’ति’क स’म्ब’न्ध, सासुले देखेपछि घटना खुल्ने ड’रले वि’ष खु’वा’ए (भिडियो हेर्नुस्) – Chautari Online
छोराको बिवाह गरेर ल्याएको ४ दिन पछि नै ससुरा र बुहारीबीच अ’नै’ति’क स’म्ब’न्ध, सासुले देखेपछि घटना खुल्ने ड’रले वि’ष खु’वा’ए (भिडियो हेर्नुस्)
September 30, 2020 933
काठमाडौ । पनौतीमा सोच्नै नसकिने घटना भएको छ । आफ्नै छोराको श्रीमती (बुहारी) संग ससुराको न रा म्रो स म्ब न्ध खुल्ने भएपछि सासुको ज्या न लिने कोशिष गरिएको छ । रमेश बस्नेत र नेत्र कुमारी बस्नेतका ३ छोरा छन् । जेठो छोराको ५ वर्ष अघि नै विवाह भइसकेको छ । अरु दुई छोराको पनि विवाह भयो । ससुराले कान्छो बुहारीसंग न रा म्रो स म्ब न्ध राखेको सासुले देखेकी हुन् ।
ससुरा रमेश बस्नेतलाई आफ्नै कान्छी बुहारीसंग नेत्र कुमारीले देखेपछि अहिले नेत्र कुमारीको ज्या न लिने कोशिष गरिएको हो । ससुरा र बुहारकिो स म्ब न्ध बाहिरिने जोखिम भएपछि ससुरा र बुहारी मिलेर खानामा वि ष खु वा एर ज्या न लिने कोशिष गरेको महिलाका आफन्तले बताएका छन् । छोराको विवाह भएको एक साता पछि नै उनीहरु बीच त्य स्तो काम गरेको देखेको सासुले आफ्नो बहिनीलाई बताएकी छन् ।
सासुले लामो समय देखि नै त्यो घटना थाहा पाएकी थिइन् । तर आफुले नदेखे जस्तो गरेपछि उनीहरुले न राम् रो काम गर्न छोड्लान भनेर सासुले वास्ता गरिनन् । तर उनीहरुको मनोबल भने बढ्दै गयो । ससुरा र बुहारीको स म्ब न्ध आफुले देखेपछि ज्या न लिन थाले भन्दै उनी माइत भा गे र गएकी थिइन् । तीन महिना उनी बहिनीसंग बसिन् । श्रीमानले फकाएर वहिनीको घरवाट लिएर गए तर फेरी पनि उनीहरुको उस्तै क र्म जारी भयो । त्यस क्रममा उनीहरुले फेरी खाना र चियामा वि ष मि सा ए र खान दिएको चिकित्सकले बताएका छन् ।
अहिले नेत्रको अवस्था ग म्भि र अवस्थामा पुगेको छ । नेत्रले आफ्ना कान्छा छोरालाई बुहारीलाई मैले ससुरासंग देखे भनेर सुनाउँदा छोराले आमा नबोल्नु म अर्को विवाह गरौंला भनेर सान्त्वना दिएको बताएकी छन् । अहिले नेत्रको दिदी बहिनी उनको ज्या न बचाउन आग्रह गर्दै मिडियामा आएका छन् ।
Prevमंगलबार भगवान गणेशको ब्रत बसी पुजा पाठ गरे मिल्छ तपाईलाई यस्तो फलीफाप
Nextबि’छि’प्त पार्ने त्यो तस्बिरः जो भारतबाट घर फर्किए, आँगन टेक्न पाएनन्
अब ‘हाम्रो पात्रो’बाट अडिओ/भिडिओ कल गर्न मिल्ने
भदौ २० गते शनिबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
काठमाडौंमा कुखुराको मासु तीन वर्षयताकै सस्तो
कुर्कुचा फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? यो हो निको पार्ने विधि घरेलु बिधि ! (1042)